Guddi loo saaray qasaarihii ka dhashay maqnaanshihii Internet-ka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Guddi loo saaray qasaarihii ka dhashay maqnaanshihii Internet-ka
Guddi loo saaray qasaarihii ka dhashay maqnaanshihii Internet-ka
Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay Guddiga Khubaro ah in loo saarayo in ay soo baaraan khasaarihii ka dhashay mudadii uu maqnaa Internetka.
Wasiirka Wasaaradda Boostada iyo Isgaariisnta xukuumadda Federaalka Soomaaliya Eng. Cabdi Canshuur oo maanta warbahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay kharashka khasaare ahaan u soo gaaray Ganacsatada mudadii uu maqnaa Internetka.
Wuxuu sheegay Wasiirka dhaqaale fara badan in uu ku lumay intii uu maqnaa Adeegga Inernetka ee Viber Optico, isaga oo sidoo kale tilmaamay in la sameyn doono Guddi soo baara dhaqaalaha rasmiga ee ku lumay maqnaasha Inernetka.
Muddo 23 maalmood kadib ayaa waxaa qadka internet-ka dib looga helay Koonfurta Soomaaliya, kadib markii Fiiladii Internet-ka 24-kii Bishii hore uu jaray markab.
Dowladda ayaa horay waxaa ay u sheegtay in maqnaansha internet ka uu dalka gaar siiyay qasaaro lacageed oo maalintii lagu qiyaasay $10miliyeen oo doolarka Maraykanka ah.
Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir ayaa dhowaan sheegay in xafiiskiisa uu furay baaritaano Ku maqnaanshaha internet ka kaasi oo markii dambe la ogaaday inuu internet ka xargihiisa uu jiray markab kaasi oo La sheegay in magdhow la waydiin doonno.
Previous articleImaaraadka oo la ogaaday in uu ka dambeeyay afduubkii wakaaladda wararka Qadar
Next articleXeer ilaaliyaha guud ee Qaranka oo ku baaqay in lagu laabto doorashada kuraasta khilaafku uu wali ka taagan yahay ee Baarlamaanka